Sidee loo xisaabiyaa qabowga dabaysha? | Saadaasha Shabakadda
Sidee loo xisaabiyaa qabowga dabaysha?
Monica Sanchez | | Saadaasha Shabakadda
Dadku, sida dhammaan xayawaanka, waxaan awood u leenahay inaan xakameyno heerkulka jirkeena mahadda hypothalamus, taas oo ah qayb maskaxda ka mid ah oo ku taal maskaxda una shaqeysa si la mid ah kuleylka: marka heerkulka guriga uu ka sarreeyo barta la dejiyay, waxay joojisaa kuleylka si ay u hoos u dhigto.
La dareen kulul Waa dareenka qabow ama kuleylka aan dareemeyno iyadoo loo eegayo isku darka cabirrada saadaasha hawada, oo ay ka mid yihiin huurka iyo dabaysha. Laakiin, Sidee loo xisaabiyaa?
Ma heli doonno kuleyl isku mid ah maalin uu heer-kulku akhriyo 35ºC iyo dabayl koonfureed oo ku dhacda 20 kiilomitir saacaddiiba, marka loo eego maalin kale oo leh heer kul isku mid ah laakiin aan lahayn dabayl. Sababta Sababtoo ah jirka oo idil lakab hawo ah ayaa urursan, oo loo yaqaan lakabka xadka. Khafiifinta ay sabab u tahay saameynta dabaysha, ayaa sii weynaaneysa kuleylka.
Aadanaha wuxuu leeyahay heerkulka jirka oo ah 37 darajo Celsius. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay daraasado kala duwan waxaan qaadi karnaa 55 darajo oo leh qoyaan caadi ah, ama darajooyin ka sareeya xaaladaha qoyaanku ku yar yahay. Tusaale ahaan waa saunada, oo heerkulkeedu gaarayo 100 digrii oo dadka halkaas taga cagtooda ku baxaan kalfadhiga kadib 😉.
Hadda, haddii qoyaanku sarreeyo ama aad u sarreeyo markaa dhibaatooyin ayaan la kulmi lahayn. Iyada oo 100% qoyaan ah waxaan u adkaysan lahayn oo keliya 45 digrii daqiiqado, maadaama uumiga biyuhu uu sanbabbada ku soo ururi doono.
Sidee loo qiyaasaa qaboojinta dabaysha? Sannadkii 2001 saynisyahano u dhashay Canada iyo Maraykanka ayaa sameeyay qaacido qeexan oo ay ku heleen tijaabooyin shaybaar oo ay ku adeegsadeen diyaaradaha hawada heerkulka kala duwan iyo xooga dabaysha wajiga iyo hubinta luminta kuleylka maqaarkooda soo maray. Waa ku xiga:
Tst = 13.112 + 0.6215 Ta -11.37 V0.16 + 0.3965 Ta V0.16
Sidaa awgeed waxaan ku ogaan karnay in heerkulka 10ºC iyo dabayl dhan 50km / saacaddii, natiijada kuleylka ee ka dhalata ay noqon doonto -2ºC. Marka waa wax aad u xiiso badan in fiiro gaar ah loo yeesho jirkeena heerkulbeegga ka hor si loo ogaado dharka ay tahay inaan xirno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sidee loo xisaabiyaa qabowga dabaysha?
Raad-raacii Duufaantii Harvey